DEG-DEG: Christian Eriksen oo si rasmi ah ugu biiray kooxda Inter Milan – Gool FM
DEG-DEG: Christian Eriksen oo si rasmi ah ugu biiray kooxda Inter Milan
(Milano) 28 Jan 2020. Christian Eriksen ayaa si rasmi ah kaga mid noqday kooxda Inter Milan ee waddanka Talyaaniga, taas oo lala xiriirinayay todobaadyadii dambe.
Eriksen ayaa Inter kaga mid noqday adduun lacageed dhan £16.8m xilli uu noqonayo saxiixii afarad ee Inter Milan.
Inter ayaa horey ula wareegtay saxiixyo ay ka mid yihiin Victor Moses oo amaah ah iyo Kaptankii hore ee Manchester United Ashley Young.
Ciyaaryahanka caalamiga ah ee reer Denmark ayaa Inter Milan u saxiiixay heshiis gaaray ilaa iyo sanadka 2024.
Christian Eriksen ayaa 28 kulan ka soo muuqday Kooxdiisa Tottenham Hotspur, iyadoo lagu wado in uu ka soo muuqan karo kulan Inter ay la ciyaari doonto kooxda Udinese, ciyaar qeyb ka ah horyaalka dalka Talyaaniga.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Ajax ayaa ku biiray Tottenham Hotspur sanadkii 2013, isagoi ka soo muuqday 226, xilli muddadaas uu dhaliyay 51 gool, waxaa xusid mudan in mudadaasi uu san wax koob la qaadin.
Rio Ferdinand oo muujiyay sida uu ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka xiddig ka tirsan Arsenal
Gabriel Martinelli oo ammaan ka helaya mid ka mid ah halyeyada kooxda Arsenal